आज फेरी बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! हेर्नुस् कति पुग्यो ? - Nepal Insider
January 15, 2020 308
बुधबार नेपाली बजारमा फेरि सुनको मूल्य बढेको छ । अघिल्लो दिन तोलामा ७४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार रु ७०० बढेर ७४ हजार ७०० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार तेजावी सुन बुधबार तोलामा ७० हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी पनि बढेको छ । मंगलबार तोलामा रु ८८० मा कारोबार भएको चाँदी बुधबार बढेर रु ८८५ मा कारोबार भएको हो ।
Prevभाइको उपचारको लागि खर्च जुटाउन आफु भोकभोकै बसेकी दिदीको मृ’त्यु !
Nextदुर्घ’टना हुनु एकदिन अघि मात्रै गायक निशान भट्टराइले यस्तो भनेका रहेछन !
कुवेतमा कार्यरत एक नेपाली युवा सम्पर्कविहीन, खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह
प्रमिला र सुरेश यसरी भागेर गएका थिए हेर्नुहोस्, कथा सुन्दा कसको मन रु*दैन होला र ? (हेर्नुस् भिडियो)